Noocyada ugu caansan ee sans-serif | Abuurista khadka tooska ah
Xogta Sans Serif waa kuwa aan ku aragnay filimo badan iyo xitaa noocyo waaweyn ayaa isticmaala. Laakiin intaas kaliya maahan, laakiin waa heer sare ee qoyska si loogu mashquuliyo tuducyadaas waaweyn ee aan ka arki doonno shaashadda qalabka moobiilka ama PC-ga.
Sidaa awgeed, waxaan ku tuseynaa noocyada ugu wanaagsan ee loo yaqaan 'sans serif', sharaxaad ku saabsan sababta loogu yeero sidaas ama xitaa asalka magiciisa. Waxaan ogaan doonnaa ilahaas, sida Futura, oo awood u leh in lagu arko xitaa Dayaxa markii NASA ay adeegsatay maalintiisa. U tag.
1 Waa maxay nooca Sans Serif?
1.1 Afarta koox ee ugu waaweyn
2 Muxuu gudbinayaa qoraalka nooca 'Sans Serif typeface'?
3 Noocyada ugu wanaagsan ee Sans Serif
3.2 Xafiiska Grotesk
3.3 Dawan gothic
3.7 Droid sansan
3.16 Wararka Gothic
3.17 Tiro badan oo Pro
Waa maxay nooca Sans Serif?
Haddii aan tagno wikipedia waxaan ka heli karnaa taas sanqadh sir ah Waa nimco la'aan ama warqad qalalan. Taasi waa, dabeecad kasta oo ka maqan waxa loogu yeero serifs ama serifs; maxay yihiin qurxinta caadiyan ku yaal dhammaadka xariiqyada jilayaasha.
Noocani wuxuu guud ahaan loo isticmaali karaa cinwaanada iyo la'aanta serifyadaas ama serifyadaasMarkaad ka eegto aragtida akhristaha, waxay ku qasbeysaa indhaheenna inaan aad u culeysno markii aan akhrinayno qoraallo waaweyn.
Laakiin dabcan, haddii aan u tagno dijitaal oo aan wax ku akhrino shaashadda, sida aaladaha mobilada, kiniiniyada ama akhristayaasha, sabab u ahaanshaha 'pixelation' ayaa lagu gaadhay in sans serif ah u muuqdo mid aad uga cad oo ka nadiifsan noocyada xarfaha leh serifyadaas ama serifyadaas. Marka haddii aad raadineyso font kaamil ah oo aad ku aqrin karto aaladda moobaylka, sida degsiimooyinka bogagga ama baloogyada, sans serif waa ka sii fiican yahay bogagga waaweyn ee qoraalka.
Inta udhaxeysa ilaha ugu caansan sans serif waan heli karnaa Helvetica, Avant Garde, Arial iyo Geneva. Noocyada Serif waxaa ka mid ah Times Roman, Courier, New Century Schoolbook, iyo Pataino.
Afarta koox ee ugu waaweyn
Waxaan haynaa afar koox oo waaweyn oo ku jira sans serif:
Koofi- Xarafyada Grotesque waxay leeyihiin kala duwanaansho ballaadhan oo faalig ah. Dhamaadka gooladaha intabadan waa kuwo jiifa oo leh "G" iyo "R" oo lagu jiido "lugta qalooca". Tusaalooyinka qaarkood ee 'grotesque' waa: Venus, News Gothic, Franklin Gothic, iyo Monotype Grotesque.
neo grotesque: waxaan wajaheynaa isbeddelka tooska ah ee noocyada 'grotesque'. Waxaa lagu gartaa xarfaha waaweyn oo leh ballac isku mid ah. Qaar ka mid ah nashqadaha casriga ah ee loo yaqaan 'sans serif'.
Joometri: oo ku saleysan qaababka joomatari oo aad ugu dhow wareegyada iyo shabakadaha. Sifooyinka guud ee ay wadaagaan waa xaraf-weyne 'O' iyo 'sheeko keli ah' oo loogu talagalay kiiska hoose 'a'. Afartaas qaybood, kuwa joomatari ahaan badiyaa waa kuwa ugu yar ee loo isticmaalo jirka waana kuwa ugu badan ee loo adeegsado madaxyada ama marinnada yaryar ee qoraalka.
Dadnimada: waxaa lagu dhiirrigeliyaa qaab-dhaqameedka ugu caansan. Naqshadeynta bini'aadamnimada way ka duwan tahay Gothic ama joomatari. Naqshadaha kale waxay noqon doonaan joomatari ahaan sidii Gill Sans.
Muxuu gudbinayaa qoraalka nooca 'Sans Serif typeface'?
Ereyga sanku wuxuu ka yimid erayga Faransiiska "sans", oo macnaheedu yahay "la'aan." Halka "serif" aan la garanayn halka uu ka soo jeedo. Waxaa la sheegay inay u badan tahay inay ka timid erayga Nederlandka ah "schreef" oo macnaheedu yahay "xarriiq" ama qalin qalin.
Sans serif waa nooc ka mid ah ayaa caan ku noqotay soo bandhigida qoraalka shaashadaha kombiyuutarka. Go'aannada hoose, faahfaahintaas ayaa luntay. Oo waxaa jira qaar ka mid ah noocyadooda oo ay si ballaaran u isticmaalaan noocyo caan ah. Waxaan ka hadleynaa Futura ka dibna magacyada sida Calvin Klein, Louis Vuitton, Volkswagen, IKEA, Redbull iyo kuwa kale oo badan ...
Waxaan sidoo kale ka heli karnaa filimo fara badan sida Space Odyssey, Quruxda Mareykanka ama Shabakada Bulshada. Futura waa sansan xoog badan oo ku dhisan joomatari. Waxaan uga hadlaynaa Futura inay tahay fartii ay NASA u adeegsatay xusuusta xusuusta ee Dayaxa gelisay 1969. Marka xaaladdan oo kale waa mid ka mid ah ilahaas taariikhda ku suntan.
Noocyada ugu wanaagsan ee Sans Serif
Si aan u dhammeyno waan ku siin doonnaa liis ballaaran oo xarfaha Farsamada Sans Serif ah taasina waxay kaa caawin doontaa inaad siiso taabashadaas xarrago iyo akhrinta websaydhkaaga, balooggaaga, e-gacmeedka ama bogga soo degitaanka. Aan raacno iyaga.
Ilo ah in kor loogu qaado qoraalada si loo furo iyo in akhristaha ku dhow yahay akhriskaaga.
Sans serif casri ah oo bixiya noocyo kala duwan oo jilayaal aad u soo jiidasho leh. Loogu talagalay 1989-2006 abuurayaal kala duwan.
Download: Xafiiska Grotesk
Estamos ka hor aad u fudud sans serif iyo in loo hindisay waqtigaas buuggaagta telefoonnada. Waxaa lagu gartaa meelaha deeqsinimada leh ee u dhexeeya jilayaasha.
Download: Dawan gothic
Una font fudud oo casri ah taas oo loo adeegsan karo xalal badan oo kala duwan. Waxaad ku haysaa 6 miisaan oo kala duwan. Waxaa loogu talagalay 2010 by Alexandra Korolkova, Olga Olempeva iyo Vladimir Yefimov.
Download: PT SANS Pro
Xarfaha kale ee Google kaas wuxuu ku dhashay Akadeemiyada Farshaxanka Fiican ee Urbino sidii mashruuc wax ku ool ah. Ilo ka dhasha iskaashiga ardayda kala duwan sanadba sanadka ka dambeeya si loo sii wanaajiyo.
Font Google ah oo loogu talagalay oo ah mashruuc qalin jabin ah oo ka socda Jaamacadda Akhriska. Sifif casri ah oo bini-aadam ah oo loogu talagalay in diirada lagu saaro akhriska shaashadda. Kaliya aaladaha hoose ee Android, sidaa darteed waxyaabaha qaarkood ...
Foomamka xarrago leh, ee soo dhaweynta fudud iyo inaan labadaba u isticmaali karno shabakadda sida daabacaadda, farshaxanka iyo xitaa ganacsiga. Sifo serif ah oo aad u kala duwan oo muhiim u ah buuggaaga qoraalka.
Degso: Bebas Neue
Mid ka mid ah farriimahaas saaxiibtinimo ee la abuuray calaamadaha iyo bixinta tayada ugu fiican la soo bandhigayo. Waxaa naqshadeeyay Steve Matteson sanadkii 2009.
Download: Droid sansan
A serif aan awoodno ka hel bilaash sida Google Font iyo in la qaabeeyey intii u dhaxeysay 2010 iyo 2011. Waxay ku sii jirtaa nidaamka hawlgalka, laakiin waa la siin karaa adeegsiyo kale.
Ilo ah ine waxaa lagu sifayn karaa xarrago, noqo joomatari iyo iftiin heer sare ah. Elegance loogu talagalay sans serif kale oo si fiican loo aqoonsan yahay.
Una sans serif oo u istaagi kara cadayntiisa oo nadiif ahaw ku filan si aad ugu qaadatid qaabab kala duwan.
Una ka yimid Google Fonts taasna sinaba looma waayi karo. Nooc xarrago leh oo ujeeddadiisu tahay inuu ku jiro madaxyada iyo noocyada kale ee jilayaal waaweyn. Waxay leedahay font walaasheed oo lagu magacaabo Raleway Dots. Feejignaanta noocyadeeda kala duwan ee miisaanka.
Si la mid ah farta Lucida, waxaa loo qaabeeyay asal ahaan nidaamka X Windows. Waxaa loo qaybiyey nidaamyada hawlgalka sida Linux.
Una font leh taabasho xirfad leh taasina waa mid kale oo ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan. Midkoodna kuwa ugu caansan ma maqna oo ma dhigayo Helvetica Neue dambi ma noqon doonto. Haddii aad ka hadli karto xalalkaaga ugu fiican, waxaan ka hadli karnaa suuq geynta mahadcelinteeda cad iyo akhrinteeda oo lagu daray hal ilo.
Waxaa lagu gartaa tayada ugu fiican iyo xarrago ay ku xirtaan ganacsiyo kala duwan. Waxaa qaabeeyay Charles Bigelow iyo Chris Holmes sanadkii 1986.
Far kale oo aad u qurux badan oo aan cidna dan ka lahayn. Waxay leedahay 28 font miisaanka la heli karo waxaana naqshadeeyay 2003 Erik Spiekermann. Font casri ah oo ka mid ah kuwa ugub ku ah liiskan weyn ee xarfaha noocyada 'sans serif'.
Una ee noocyada sans serif noocyada. Waxaa loogu talagalay 1970 by Herb Lubalin iyo Tom Carnase. Waxaa sidoo kale lagu gartaa culeyskeeda badan iyo kala duwanaanshaheeda markii loo adeegsaday xalal kala duwan.
Download: Avant Garde
Si ballaaran loo isticmaalo dhammaan noocyada qaabab daabacaadaha sida joornaalada, joornaalada iyo noocyada kale ee warbaahinta. Waxaa abuuray Morris Fuller Benton oo loogu talagalay ATF oo leh miisaan kala duwan. Font aad u qurux badan
Download: Wararka Gothic
Tiro badan oo Pro
Una noocyada ugu caansan ee ku qoran liiskan iyo in si weyn loogu isticmaalay bandhigyada iyo sidoo kale qoraalka qaabeynta Photoshop. Waxaa soo saaray Adobe lafteeda 1992 waxaana ku heli karnaa qaabab badan oo kala duwan.
Download: Tiro badan oo Pro
Ilo aad u xarrago iyo soo jiidasho leh taas oo loo isticmaali karo calaamadaha, magacyada meheradaha iyo noocyada kale ee sheegashooyinka. Naqshadeeyay Hermann Zapf sanadkii 1958, muddo ayuu nala joogay.
Ilo ah in waxaad u isticmaali kartaa boggagaaga shaqsiyeed sida arrimaha shirkadaha iyo ganacsiga. Naqshadeeyay Eric Gill sanadkii 1928 taasna waxay kaloo leedahay culeysyo kaladuwan oo aad ugu adeegsan karto waxyaabaha u gaarka ah.
La fudeydku waa mid ka mid ah wanaagyada ugu waaweyn nooca qoraalkan oo uu qaabeeyey sanadkii 1988-kii Adrian Frutiger. Mid ka mid ah yoolashiisu waxay ahayd inuu iyada u horseedo dhammaan noocyada xalka mustaqbalka.
Una Sans serif qurux badan oo leh faahfaahin badan meelahaas aan ku kala soocan nahay. Waxaa naqshadeeyay Panos Vassiliou 2002-dii oo waliba lagu gartaa culeyskeeda ballaaran.
Naqshadeeyay sanadkii 1927 waxaa qoray Paul Renner Wali wali waa mid hada jira oo culeysyadeeda kaladuwan ee kaladuwan ayaa u ogolaanaya in lagu qaado dhamaan noocyada qaabab. Mid ka mid ah Classics-ka oo aan lagu waayi karin buug-yare kasta.
Mid kale oo ka mid ah farta saaxiibtinimo taasi waxay leedahay astaamaha u ekaanshaha shaashadda qalabka mobilada. Feejignow noocyada kala duwan ee miisaanka si aad ula ciyaarto.
Una laga helay ilaha hore, laakiin waxay ahayd mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan tan iyo markii ugu horreysay ee ay soo baxday 1950. Waxaa lagu soo bandhigay waqtigaas magaca Neue Haas Grotesk in loogu magac daro Helvetica.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Fuentes » Noocyada ugu caansan ee sans-serif
Kuwani maahan xarfaha sirta ah ... WAA NOOCYADA SANS
Ku jawaab dwedwe